ऋण तिर्न ५ महिना अघिमात्र भारत पुगेका राजको भोक प्यासले त’ड्पिएरै मृ’त्यु Rip Rip ? – Taja Khawar
ऋण तिर्न ५ महिना अघिमात्र भारत पुगेका राजको भोक प्यासले त’ड्पिएरै मृ’त्यु Rip Rip ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १४, २०७८ समय: १८:३८:२८
आमाको उपचारमा भएको खर्च, घन बनाउन लागेको खर्च अझै तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । हाल दिल्लीमा रहेकी इस्मकै भारती सुनारका अनुसार राजले अस्पतालबाट जँचाएर फर्किए पछि कसैलाई रिपोर्ट नदेखाएका कारण साथीहरुले को’रोना सं’क्रमण लागेको आशंकामा साथ छाडे । परिणाम स्वरुप भोकैप्यासै त’ड्पिएर उनको मृ,त्यु भएको भारतीको भनाइ छ । भारतीका अनुसार राजको दा’ह सं’स्कारमा आएका अर्घाखाँचीका बुद्ध भन्ने एकजना युवाको पनि तीन/चार दिनपछि मृ,त्यु भएको छ
Last Updated on: June 28th, 2021 at 6:38 pm